Rwanda: Quruxda Rwanda ... "Waxa naagtu rabto, xitaa Ilaah ayaa raba" | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 12, 2017 00: 00 No Comments
Rwanda qadiimiga ah, waxaa jiray waxyaabo badan oo kala duwan oo qurux badan. Sidaas oo kale, gabdhaha iyo haweenku waxay isticmaalaan marmarka ba'an (gaalnimo). Waxay si joogto ah u lumeen wejigooda, macbudyada iyo xitaa jirka oo dhan. Waxay u ogolaadaan inay qalalaan. Intii la maydhin lahaa, waxay ka saartay timaha aan loo baahneyn.
Waxaan ahay maanta; Shalay ayaan ahay; Waxaan ahay berrito ... Dhalashooyinka badan ee dhalashoyda, waxaan weli ku sii ahaanayaa dhallinyaro adag
Oct01 10: 39